Qarax Ka Dhacay Magaalada Nairobi Iyo Fahfaahin Ku Saabsan Siday Wax U Dhaceen | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Qarax Ka Dhacay Magaalada Nairobi Iyo Fahfaahin Ku Saabsan Siday Wax U Dhaceen
Giriyaadnews-Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax xalay ka dhacay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasi oo ka dhex-dhacay gaari bas ah oo maraye xaafada Soomaalida ay dagto ee Islii.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha Booliiska dalka Kenya, ilaa afar ruux ayaa ku geeriyootay qaraxaasi kuwaasi oo ahaa dhamaantood dad shacab ah oo gaariga baska saarnaa. Dhaawacyada ka dhashay qaraxaasi ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 25-ruux oo shacab ah kuwaasi oo la dhigay isbitaal si xaaladooda caafimaad wax looga qabto,Qof ka bad baaday qaraxa ayaa sheegay inuu maqlay qarax weyn gudaha Baska lagu magacaabo Matatu oo ay saarnaayeen dad badan.
Booliiska Kenya ayaan ilaa iyo hada hadal toos ah kasoo saarin qaraxan xalay ka dhacay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo qal-qalgeliyay Soomaalida ku nool dalkaasi.
Kenya ayaa waxa ay ciidan kajoogaan Soomaaliya, waxaana ay dagaal adag kula jiraan Ururka Al-Shabaab, oo dhawaan Magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ka geystay weerar ay ku qaadeen xarunta Ganacsiga Westgate, halkaasi oo ay ku dileen ku dhawaad 67-ruux oo shacab
« Dekeda Lughaya Oo Loogu Deeqay Cagaf Ay Soo Iibiyeen Jaaliyad Ku Nool Dalka SWEDEN Daawo Gudida Qaban- Qaabada Shirwaynaha Samatalis Ee Beelaha Bahabar Muuse+VIDEO »